1985 – Year – Channel Myanmar
Back to the Future (1985) ဒီဇာတ်ကားက ၁၉၈၅ ခုနှစ်က ထွက်ထားတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။Time Machine နဲ့အတိတ်ကိုသွားတဲ့ ပုံစံရိုက်ကူးထားပြီး အဲ့ဒီခေတ်လောက် ကတည်းကဆန်းသစ်တဲ့ Idea...ပစ္စည်းတွေကို သုံးပြီး ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးထားတာ ချီးကျူးဖွယ်ရာပါ။Adventure, Comedy, Sci-Fi အမျိုးအစားဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်....ရယ်လဲရယ်ရသလို အဲ့ဒီခေတ် အဝတ်အစား ...ဒီဇိုင်း ...ပြောပုံဆိုပုံ... သရုပ်ဆောင်မှုတွေအကုန်လုံးရိုးသားသန့်စင်တဲ့အမူအရာနဲ့ နှစ်သက်ဖို့ကောင်းလွန်းပါတယ်။IMDb Rating (8.5/10) ထိရရှိထားသလို Rotten Tomatoes မှာလဲ (96%) ထိရရှိထားတဲ့ဇာတ်ကားပါ။Time Travel ဇာတ်ကားတွေထဲမှာတော့ အကောင်းဆုံးနဲ့ လူကြိုက်အများဆုံးလို့ သတ်မှတ်ရမယ့် ဇာတ်ကားပါ။Back to the Furure Trilogy အစအဆုံးကို back to the future – Search Results – Channel Myanmar မှာ ဝင်ပြီး ဒေါင်းလို့ရပါတယ် Quality__1080p Bluray HEVC IMDb Rating__8.5/10 Format__mp4 Duration__1h 56min Type__Adventure, Comedy, Sci-Fi Subtitle__Myanmar ...
The Breakfast Club (1985) The Breakfast Club (1985)ဒီတစ်ခေါက် CM team မှ တင်ဆက်ပေးမှာကတော့80s Classic Teen Comedy အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးIMDb 7.8 နဲ့ Rotten Tomatoes 89%ရရှိထားတဲ့The Breakfast Club ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။Teen Comedy ဖြစ်လို့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပဲကျောင်းသား၅ယောက်နဲ့ ဇာတ်အိမ်ဖွဲ့ထားပါတယ်ပင်ကိုယ်စရိုက်ချင်းမတူညီကြတဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူငါးယောက်ဟာကျောင်းစည်းကမ်းတွေကို မတူညီတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ ချိုးဖောက်ခဲ့ကြလို့ကျောင်းပိတ်ရက် စနေနေ့မှာ ကျောင်းစာကြည့်တိုက်ကိုလာပြီးကိုယ့်အပြစ်ကိုယ် ဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြရပါတယ်။လူကြီးမဖြစ်သေးပေမယ့် ကလေးလည်းမဟုတ်တော့တဲ့ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်တွေအနေနဲ့လူကြီးမိဘ ဆရာသမားတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေကြပြဿနာတက်ပုံတွေ မတူညီကြပေမယ့်တူညီတဲ့အရာတစ်ခုကတော့တဖြည်းဖြည်း ကိုယ့် စိတ်နှလုံးသားကို ဖွင့်ပေးရင်းတစ်ယောက်အကြောင်းတစ်ယောက် ရိုးရိုးသားသားဖွင့်ဟပြောဆို လက်ခံပေးကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ငယ်ဘဝခံစားချက်ကသူတို့ထဲက ဘယ်တစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက်နဲ့များထပ်တူကျနေမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ပြီး ခံစားပေးကြပါဦးReviewed and Translated by JerricaFile size…1.4GB and 638MB Quality….WEB-DL 1080p and 720p Format…mp4 Duration….1hr 37min Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Translator ..... Jerrica Encoder ..... ...
Red Sonja (1985) မင်းသားကြီး အာနိုးရဲ့ နာမည်ကျော် ရောမခေတ်ဇာတ်ကားတွေထဲက တစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။Red Sonja ဆိုတာကတော့ Comic တစ်ခုထဲက ဇာတ်ကောင်တစ်ကောင်ရဲ့နာမည်ပါ။ဒါကိုအခြေပြုလို့ရိုက်ကူးထားပြီး Action, Adventure, Fantasy အမျိုးအစားဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ငယ်ငယ်က ဗွီဒီယိုရုံတွေမှာ အာနိုးကြီး ဓါးတရမ်းရမ်းနဲ့ ပွဲကြမ်းခဲ့တာတွေကို မှတ်မိသွားနိုင်ပါတယ်။ File size…(999 MB) Quality…Blu-Ray Rip 720p Format…mp4 Duration….01:30:00 Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Encoder….Nyeinsaeya Aung Translated by Tariq L Walker
Twinkle, Twinkle, Lucky Stars (1985) 1983 ခုနှစ်မှာထွက် ရှိခဲ့တဲ့ Winner & Sinner ရဲ့အဆက် ဒုတိယကား My lucky star ရဲ့နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် Twinkle Twinkle Lucky Star ကို ထပ်မံထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်ပထမ ၂ကားလိုပဲ အရူး ၅ယောက်ဟာ အလွဲတွေလုပ်ပြီး ဟာသတွေနဲ့အရွန်းဖောက်ပြီး ပရိတ်သတ်ကို မငြီးငွေ့စေပဲ တကားလုံးကို ဆွဲခေါ်သွားမှာပါဇာတ်လမ်း အကျဉ်းလေးကတော့ ဟောင်ကောင်အစိုးရဟာ သက်သေရှာမရလို့လွတ်ထားရတဲ့ မူးယစ်ဆေးဂိုဏ်းကို ဖော်ထုပ်ဖို့အတွက် တလွဲ၅ယောက်ကို တဖက်လှည့် နဲ့ ထောင်ကလွတ်ပေးလိုက်ရပြန်ပါတယ် မက်လုံးအနေနဲ့ကတော့ ဒီအမူပြီးရင် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရမှာပါ ကဲ ပရိတ်သတ်ကြီးရေအလွဲ၅ကောင်က ဘယ်လိုအလွဲတွေနဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးကို တခွီးခွီးရယ်နေစေမလဲဆိုတာကိုတော့ ဆက်လက်ကြည့်လိုက်ကြပါဦးလား _ Zawgyi_1983 ခုႏွစ္မွာထြက္ ရွိခဲ့တဲ့ Winner & Sinner ရဲ႕အဆက္ ဒုတိယကား My lucky star ရဲ႕ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ Twinkle Twinkle Lucky ...
My Lucky Stars (1985) ပထမကား မှာ ဝက်ဝက်ကွဲအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ Winner and Sinner ဟာ သူ့ရဲ့ဒုတိယကားအဖြစ် My Lucky star ကို ၂နှစ်အကြာမှာပဲထပ်မံရိုက်ကူးခဲ့ ပါတယ် ဒီကားမှာလဲ ပထမ ကားက အလွဲ၅ကောင်ပဲ ဆက်လက် သရုပ်ဆောင်ထားပြီး သူတို့ရဲ့ ပြောင်မြောက်လှတဲ့ စုံထောက်ပညာတွေနဲ့ပဲ အစွမ်းပြ ဦးမှာပါ ဒီကားကိုတော့ ဂျပန်မှာသွားရောက်ရိုက်ကူးထားတာဖြစ် ပါတယ်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ဂျက်ကီချန်းဟာ ဟောင်ကောင်ရဲအရာရှိဖြစ်ပြီး သူဟာ ဂျပန်ခြစိုက် ရာကူဇာ ဂိုဏ်းကိုဖြိုခွဲဖို့အတွက်ကြိုးစားထောက်လှမ်းနေသူတယောက်ပါ တစ်နေ့မှာ သူ့ ပါတနာက လုပ်ကြံခံ လိုက်ရတဲ့အတွက် သူဟာမစ်ရှင်တခုအောင်မြင်ထားဖူးတဲ့ အလွဲ၅ကောင်ကို အကူအညီတောင်းဖို့ ဖြစ်လာပါတော့တယ် အဲ့သည်မှာ အလွဲ၅ကောင်က ဂျပန်ကိုလိုက်လာခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ လူဆိုးဂိုဏ်းကိုပဲ ဖမ်းဆီးနိုင်မလား ဘယ်လိုအလွဲတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတာကိုတော့ ပရိတ်သတ်ကြီးကကြည့်ရှူ ရမှာပါ _Zawgyi_ ပထမကား မွာ ၀က္၀က္ကြဲေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ Winner and Sinner ဟာ သူ႔ရဲ႕ဒုတိယကားအျဖစ္ My Lucky ...
Police Academy 2: Their First Assignment (1985) Officer Carey Mahoney and his cohorts have finally graduated from the Police Academy and are about to hit the streets on their first assignment. Question is, are they ready to do battle withaband of graffiti-tagging terrorists? Time will tell, but don't sell short this cheerful band of doltish boys in blue.
Police Story (1985) Police Story ဆိုတာနဲ႕ မင္းသားၾကီး ဂ်က္ကီခ်န္းဇာတ္ကားေတြမွန္း သိျပီးသားျဖစ္မွာပါ။ Police Story နာမည္နဲ႕ ဂ်က္ကီခ်န္းဇာတ္ကား ၆ ကားထြက္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္အစဥ္လိုက္ျဖစ္ေအာင္ တင္ဆက္သြားပါ့မယ္။ ဒီဇာတ္ကားကေတာ့.... ေဟာင္ေကာင္ရဲ ခ်န္ကာကူအျဖစ္ ဂ်က္ကီခ်န္းကို စတင္အသက္သြင္းတဲ့ ဇာတ္ကားျဖစ္ပါတယ္။ မူးရစ္ဂိုဏ္းတစ္ခုကို မိုးဆံုးေျမဆံု လိုက္လံေခ်မႈန္းမယ့္ ကြန္ဖူးရဲအျဖစ္ေတြ႕ရမွာပါ။ တစ္ခုသတိထားမိတာက အက္ရွင္ခန္းေတြ စတန္႕ခန္းေတြကို Effect ေတြမသံုးဘဲ လူေတြကိုယ္တိုင္ စြန္႕စြန္႕စားစားရိုက္ကူးထားတာပါပဲ... ဂ်က္ကီခ်န္းကိုယ္တိုင္ ဒါရိုက္တာလုပ္ထားတာျဖစ္ျပီး စတန္႕ေတြအတြက္ သူဘယ္ေလာက္ ပင္ပန္းခံထားလဲဆိုတာ ေတြ႕ျမင္ရမွာပါ။ ေနာက္ေျပာစရာရွိတာကေတာ့ သရုပ္ေဆာင္မႈေတြပါ... အေတာ္ေလးကိုပီျပင္ပါတယ္...ၾကည့္ေနရင္းနဲ႕ တကယ္ျဖစ္ေနသလို ပီျပင္ေအာင္ သရုပ္ေဆာင္သြားပါတယ္... ဟာသဆိုလဲ အတင္းျဖစ္ညွစ္လုပ္ထားတာမဟုတ္ဘဲ ၾကည့္ေနရင္းနဲ႕ သေဘာက်မိလာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္... (မ်က္ေမွာင္ၾကီးက်ံဳ႕ၾကီး အားစိုက္သရုပ္ေဆာင္တတ္တဲ့... အတင္းျဖစ္ညွစ္ ဟာသလုပ္ေနတဲ့ (.....)သရုပ္ေဆာင္ေတြ အတုယူဖို႕ေကာင္းပါတယ္) ကဲ....ကုန္ကုန္ေျပာရရင္ေတာ့ ဂ်က္ကီခ်န္းပရိတ္သတ္ေတြလံုးဝလက္မလြတ္သင့္တဲ့ ဟိုးအရင္တုန္းက ဂ်က္ကီခ်န္းဇာတ္ကားေလးပါလို႕။ တင္ျပီးသမွ် Police Story ဇာတ္ကားမ်ားကိုမွာရွာပါ။ ေနာက္ထပ္လာမယ့္ Police story ဇာတ္ကားေတြကိုလဲ ေစာင့္ေမွ်ာ္အားေပးၾကပါဦး။ Encoded By : Xcode
Heart of Dragon (1985) Heart of Dragon (1985)________IMDb - 6.5/10ဟောင်ကောင်အက်ရှင်လောကရဲ့ ရွှေရောင်မျိုးဆက်တွေဖြစ်တဲ့ ဂျက်ကီချန်းတို့ ဟုတ်ချင်းပေါင်(Sammo Hung)တို့အပြင်ဇာတ်ကားတွေမှာ မှော်ဆရာလုပ်နေကြ Lam Ching-ying တို့လို ဇာတ်ရံတွေ အများအပြားလဲပါဝင်ထားပါတယ်။အထူးရဲကွန်မန်ဒို ဂျက်ကီချန်းနဲ့ ကျပ်မပြည့်တဲ့သူ့အစ်ကို ဟုတ်ချင်းပေါင်တို့ကြားက သံယောဇဉ်ကိုရင်နင့်အောင် ပီပြင်စွာ ပုံဖော်ထားပြီး ဟာသတွေ အက်ရှင်တွေနဲ့လဲ ဇာတ်လမ်းကို ခပ်သွက်သွက် ဆွဲခေါ်ထားပါတယ်။ဂျက်ကီချန်းရဲ့ ငယ်မူငယ်သွေးကို အထင်းသားမြင်ရမှာဖြစ်သလို Action,Comedy,Drama ကြိုက်သူတွေ လက်မလွတ်သင့်ပါ။IMDb Rating (6.5/10) ရရှိထားပြီး ဒါရိုက်တာကလဲ ဟုတ်ချင်းပေါင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။File size…(1 GB) Quality…Extended.Japanese.Cut.BluRay.720p Format…mp4 Duration….01:38:00 Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Encoder….Nyeinsaeya Aung Translated by Hein Zaw & Thar Nyo Lwin
Happy Ghost2( 1985 ) Happy Ghost ကားရဲ႕ ဒုတိယေၿမာက္ကားပဲၿဖစ္ပါတယ္ ခ်င္မင္းဆက္ ၾကီးစိုးခ်ိန္ကာလ ကြမ္တုန္းခရိုင္ ေပါင္အန္းျမိဳ႔နယ္မွာ စိတ္ဓာတ္က်ေနတဲ့ စာေပသမားတစ္ေယာက္ရွိတယ္ ျမိဳ႔နယ္စာေမးပြဲကို 14ႏွစ္တိုင္တိုင္ေျဖဆိုခဲ့တာေတာင္ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ခဲ့ဘူး သူ႔မိန္းမ သူမ်ားေနာက္ပါသြားေတာ့ သူအရမ္း၀မ္းနည္းျပီး စိတ္ဓာတ္က်လြန္းလို႔ ဘုရားေက်ာင္းပ်က္ဆီသြားျပီး ကိုယ့္ကိုကိုယ္သတ္ေသခဲ့တယ္ ဒီလိုရင္ထဲမွာ မတရားဘူးလို႔ခံေနရရွာျပီး ေနာင္ဘ၀မကူးႏိုင္ျဖစ္ေနရတဲ့ ဒီသရဲေလးဟာ ေကာင္မေလးသံုးေယာက္နဲ႔တူတူပါလာခဲ့တယ္ က်ဴးသရဲေလးဟာ ေကာင္မေလးသံုးေယာက္ဆီကေန လူ႔ဘ၀ရဲ့ အဖိုးတန္ျခင္းကို ခံစားမိလာခဲ့တယ္ စိတ္ထဲက မေက်နပ္မွုေျပေပ်ာက္သြားျပီး သူဟာ ဘ၀တစ္ပါးကူးေျပာင္းျပီး လူ႔ဘ၀ကိုတစ္ဖန္ျပန္လာဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္ ဒီလိုနဲ႔ သရဲေပ်ာ္ေလးဟာ တစ္ဖန္ေမြးဖြားလာျပီးေနာက္ သူ႔ေရွ႕ဘ၀ရဲ့ ေကာင္းမွဳကုသိုလ္အက်ိဳးေၾကာင့္ သူတပါးနဲ႔မတူတဲ့ အခြင့္ထူးေတြကို ခံစားခဲ့ရတယ္ ဆက္လက္ခံစားၾကည္႕ရွုပါ အညႊန္းနဲ႔ဘာသာၿပန္သူကေတာ႔ Phyo Zaw ၿဖစ္ပါတယ္
Happy Ghost2( 1985 )
Rambo: First Blood Part II (1985) [Unicode]John Rambo တစ်ယောက် သူလုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကြောင့် အပြစ်ပေးခံနေရစဉ်မှာ အဖေလိုအားကိုးရတဲ့ သူ့ရဲ့အထက်အရာရှိဟောင်း Colonel Trautman က လျှို့ဝှက်စစ်ဆင်ရေးတစ်ခုကို လုပ်ပေးဖို့ကမ်းလှမ်းပါတယ်။ ဗီယက်နမ်ကိုပြန်သွားပြီး စစ်သုံ့ပန်းတွေကိုဖမ်းထားမထား စုံစမ်းခိုင်းလိုက်တာပါ။ သတင်းပို့ပေးဖို့ပဲ တာဝန်ရှိပေမယ့် Rambo က သုံ့ပန်းတွေထဲကတစ်ယောက်ကိုကယ်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ စစ်ဆင်ရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ Mardock ကသစ္စာဖောက်လိုက်လို့ အဖမ်းခံရသွားပါတယ်။ အဖမ်းခံရတဲ့ထဲက လွတ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲ ... ဘယ်လိုပြန်သွားနိုင်မလဲ ... သုံ့ပန်းတွေကိုကယ်နိုင်ပါမလားဆိုတာတော့ ကြည့်လိုက်ကြပါတော့...အညွှန်းရေးသူကတော့ d3mon ဖြစ်ပါတယ်။[Zawgyi]John Rambo တစ္ေယာက္ သူလုပ္ခဲ့တဲ့ကိစၥေတြေၾကာင့္ အျပစ္ေပးခံေနရစဥ္မွာ အေဖလိုအားကုိးရတဲ့ သူ႕ရဲ႕အထက္အရာရွိေဟာင္း Colonel Trautman က လွ်ိဳ႕ဝွက္စစ္ဆင္ေရးတစ္ခုကုိ လုပ္ေပးဖုိ႔ကမ္းလွမ္းပါတယ္။ ဗီယက္နမ္ကုိျပန္သြားျပီး စစ္သုံ႔ပန္းေတြကုိဖမ္းထားမထား စုံစမ္းခုိင္းလုိက္တာပါ။ သတင္းပုိ႔ေပးဖုိ႔ပဲ တာဝန္ရွိေပမယ့္ Rambo က သုံ႔ပန္းေတြထဲကတစ္ေယာက္ကုိကယ္လာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ စစ္ဆင္ေရးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တဲ့ Mardock ကသစၥာေဖာက္လုိက္လုိ႔ အဖမ္းခံရသြားပါတယ္။ အဖမ္းခံရတဲ့ထဲက လြတ္ေအာင္ဘယ္လုိုလုပ္လဲ ... ဘယ္လုိျပန္သြားႏိုင္မလဲ ... သု႔ံပန္းေတြကုိကယ္ႏုိင္ပါမလားဆုိတာေတာ့ ၾကည့္လုိက္ၾကပါေတာ့...အညြွန္းေရးသူကေတာ့ d3mon ျဖစ္ပါတယ္။File size…(900MB) and (400MB) Quality…BR-Rip 1080p Format…mp4 Duration….01:35:58 Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Translated by d3monEncoded by Naing Aung ...